Abiy Axmed oo Eryay Wasiirkii difaaca iyo xeer ilaaliyihii guud ee Itoobiya.
Wednesday August 19, 2020 - 10:19:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
R/wasaaraha xukuumadda Xabashida Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu isbedel ku sameeyay golihiisa xukuumadda kadib ku dhowaad laba bilood oo wadanka ay fatqalado ka socdeen.
Abiy Axmed ayaa si rasmi ah xilkii uu hayay uga xayuubiyay wasiirkiisi difaaca ninka lagu magacaabo Lemma Megerssa wuxuuna ku bedelay Kene’a Yadeta oo ahaa madaxii amaniga iyo nabad gelyada gobolka Oromiya.
Wasiirka difaaca ee lacasilay ayaa xilkan qabtay sanaddii 2019 balse khilaaf sababay in ay dhabarka isku jeediyaan Abiy axmed ayaa looga saaray xisbiga talada haya iyo golaha wasiirrada.
Guddoomiyihii gobolka Addis Ababa ayaa isna shaqada laga eryay iyo ku xigeenkiisi,taakiili ooma ayaa laga qaaday xilka guddoomiyaha iyo duqa Addis waxaana loo dhiibay xilka wasiirka culuumta iyo tacliimta sare.
Seefta xilka qaadista ayaa saameysay wasiiradii ugu awoodda badnaa xukuumadda Abiy axmed waxaana shakhsiyaadka la eryay kamid ah xeer ilaaliyihii guud ee dalka Itoobiya.
Mas'uuliyiinta qaar ayaa shaqada laga eryay iyadoo aan wax xil ah loo dhiibin halka kuwa kale jagooyinka loo kala bedelay, wariyaal ku sugan Addis Ababa ayaa soo sheegaya in tallaabadan uu qaaday Abiy Axmed uu uga gol leeyahay sidii uu xaaladda qasan ee wadankaas udajin lahaa xilli ay wali xabsiyada ku jiraan hoggaamiyaashii kooxaha mucaaradka.
Dalka Itoobiya ayaa lugaha kula jira xaalad jiha wareer ah wadanka waxaa saaran bandaw melleterigu hoggaaminayo iyadoona qowmiyadaha kala duwan ee wadankaas ay wadaan kacdoon waxaana ugu weyn qowmiyadda Oromada.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo qaadacay Heshiiskii Dhuusamareeb.